Mucaaradka Zimbabwe oo sheegtay in uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi… – Hagaag.com
Mucaaradka Zimbabwe oo sheegtay in uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi…
Xiisad ayaa ka taagan dalka Zimbabwe, iyada oo mucaaradka dalkaasi ay shegteen inay ku guuleysteen doorashadii dalkaasi ka dhacday maalintii isniinta.
Inkastoo qeyb kamid ah codadkii la dhiibtay la tiriyay ilaa iyo imika, hadana boqolaal kamid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa xiray wadooyinka caasimadda Harare, si ay ugu dabaal degaan sheegashada hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa uu ku guuleystey doorashada.
Guddiga doorashada ee dalka Zimbabawe ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasada inay isdejiyaan.
Xaaladan siyaasadeed ayaa la soo sheegayaa in ey khatar ku tahay xasiloonida wadankaasi.
Loollanka ugu weyn doorashada Zimbabwe ayaa u dhaxeeya madaxweynaha talada haya ee Emerson Manangagwa oo matala xisbiga Zanu PF, da’diisuna ay tahay oo 75 jir iyo Nelson Chamisa oo ah ninka hoggaamiyo xisbiga mucaaradka ee MDC oo 40 jir ah.